Muxuu kusoo dhamaaday mooshinkii laga keenay Reysulwasaaraha Sweden - NorSom News
Home Politikk/siyaasad Muxuu kusoo dhamaaday mooshinkii laga keenay Reysulwasaaraha Sweden
Muxuu kusoo dhamaaday mooshinkii laga keenay Reysulwasaaraha Sweden
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa baarlamanka dalka Sweden horkeenay mooshin ay ku dalbadeen in kalsoonida loogala noqdo reysulwasaaraha Sweden Stefan Löfven (S). Iyaga oo mooshinkaas sabab uga dhigay qaabkii uu u maareeyay fadeexadii IT-ga ee isbuucyo kahor hareysay hey´ada gaadiidka dalkaas.
Shaley oo jimce aheyd ayaa codka kalsoonida loo qaaday mooshinkaas, 43 ayaa u codeeyay in Stefan xilka laga qaado, halka 136 ay kasoo horjeesteen, iyada 155 ay ka aamuseen. Waxaa halkaa kusoo xirmay qorshihii xisbiga xagjirka Sweden ee SD ay rabeen inay xilka kaga tuuraan Stefan, si usoo dadajiyaan doorashada, isla markaana ay xukunka si uun usoo fuulaan ama uga mid noqdaan.
Previous articleHey´ada wadomarista: Suunka busska xiro ama 1500 NOK sii diyaarso
Next articleMaqaal: Maxaa soomaalida la gudboon doorashadii baarlamaanka kadib?